बेहुलाले रक्सी खाएपछि बेहुलीले गरिन् बिहे रद्द | Jukson
बेहुलाले रक्सी खाएपछि बेहुलीले गरिन् बिहे रद्द
बिहेको दिन बेहुलो रक्सी खाएर जग्गेमा बसेको थाहा पाएपछि एक बेहुलीले बिहे रद्द गर्दै बेहुलो सहित जन्तीलाई फिर्ता पठाइदिएकी छिन् ।
घटना भारतको हो । उत्तरप्रदेशस्थित मैनपुरीमा एक दुलहीको रिसको आगो अनुभुति गर्ने मौका पाएका छन् धेरैले । बिहे समारोहमै आफ्नो हुनेवाला लोग्ने रक्स्याहा रहेको थाहा पाएपछि दुलहीले बिहे अस्विकार गरेसँगै सबै छक्क परे । अन्ततः बेहुलो र जन्ती बेहुली विनै रित्तो हात फर्किनुपर्यो ।
बेहुलाले आफ्नै बिहेमा रक्सी पिउँदा यति चर्को मूल्य चुकाउनु परेको सायद यो पहिलो घटना हुनसक्छ । स्थानीय औछा इलाकाकी रुपा शर्माको बिहे फिरोजावादका एक युवकसँग तय भयो । रातको लगन अनुसार बिहेका लागि बेहुलो जन्ती लिएर बेहुलीकोमा आए ।
जब रुपा आफ्नो बेहुलो सहित जग्गेमा बसिन् तब उनले बेहुलोेलाई रक्सीको नशा लागिरहेकेा देखिन् ।
एक्कासी रुपाले साहस बटुल्दै कडा निर्णय गरिन् । रक्सी धोकेर बिहे गर्न आउने त्यस्तो जँड्याहा बेहुलोसँग आफुले बिहे नगर्ने उनले बताइन् । आफुले जँड्याहालाई लोग्ने बनाएर जिवन वर्वाद पार्न नचाहेको उनले बताएपछि उनका बाबुआमाले पनि समर्थन गरे । जेठी छोरीका लोग्ने यस्तै जँड्याहा भएका कारण छोरीलाई मारपिट गरिरहने पीडा जो भोगिरहेका थिए उनीहरुले, त्यहीँ सम्झे ।
आखिर बेहुली र उनका परिवार बिहे रद्द गर्न राजी भएपछि कसको के चल्थ्यो र ? रक्सीको नशामा परेका बेहुला जन्ती लिएर लुरुलुरु रित्तो हात घर फर्किन बाध्य भए ।
सेक्स टोयलाई देवदूत ठानेपछि…
दुबइमा बन्दैछ बुर्ज खालिफाभन्दा पनि अग्लो भवन
विश्वका होचा खगेन्द्र थापालाई थप उपचारको लागि काठमाण्डौंको लगियो
छुट्टिएर बस्न ऐश्वर्या र अभिषेकले किने नयाँ घर !
नानीलाई रोनाल्डोले दिए सिल्भर बुट उपहार
बाहुनको छोरा जसले जनै निकालेर कपाल काट्न थाले
नेपालगञ्ज—खजुरा सडकमा बस र ट्रक जुधे, एकको मृत्यु, २३ घाइते